Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Usuku Lomhlaba bekuleli sonto futhi sibone ukuqhutshwa okujwayelekile kokuthunyelwe komphakathi lapho izinkampani zithuthukisa imvelo. Ngeshwa, ezinkampanini eziningi - lokhu kwenzeka kanye ngonyaka kanye nangezinye izinsuku babuyela ebhizinisini njengenjwayelo. Ngesonto eledlule, ngiqede umhlangano wokumaketha enkampanini enkulu embonini yezokunakekelwa kwempilo. Elinye lamaphuzu engiwenzile ngaphakathi komhlangano ukuthi inkampani yabo ibidinga ukumaketha kangcono
Akuwona wonke amasu wokuqukethwe adinga indaba
NgoLwesithathu, Januwari 10, 2018 NgoMsombuluko, Januwari 15, 2018 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Izindaba zikhona yonke indawo futhi ngiyazigulela ngayo. Yonke insiza yezokuxhumana izama ukubaphonsa ebusweni bami, yonke iwebhusayithi izama ukungiyengela endabeni yabo yokuchofoza, futhi manje yonke imikhiqizo ifuna ukuxhumana nami ngokomzwelo online. Sicela uyiyeke. Izizathu Zokuthi Ngikhathele Izindaba: Abantu abaningi bayakhathaza ukuxoxa izindaba. Iningi labantu alizifuni izindaba. Gasp! Ngiyazi ukuthi ngizocasula ochwepheshe bokuqukethwe
ULwesine, April 3, 2014 ULwesine, April 3, 2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Sibusisiwe kwi-ejensi yethu ngobudlelwano obuhle nabasebenza ngokukhangisa kokuqukethwe - kusuka emaqenjini wokuhlela ezinkampanini zebhizinisi, kubaphenyi base-offshore nama-blogger, kubalobi babaholi abacabangayo abazimele kanye nawo wonke umuntu ophakathi. Kuthathe iminyaka eyishumi ukuhlanganisa izinsizakusebenza ezifanele futhi kuthatha isikhathi ukufanisa umbhali ofanele nethuba elifanele. Sike sacabanga ngokuqasha umbhali kaningana - kepha ozakwethu benza umsebenzi omangalisayo esingeke sawenza
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Embonini yethu, ukuqala kabusha komphakathi kuyimfuneko. Uma ungumuntu ofuna ukuthola umsebenzi ezinkundleni zokuxhumana, kungcono ube nenethiwekhi enkulu nokuba khona online. Uma ungumuntu ofuna ukuthola umsebenzi enjini yokusesha, kungcono ngikwazi ukukuthola kumiphumela yosesho. Uma ungumuntu ofuna ukuthola umsebenzi wokumaketha okuqukethwe, ngikwazi kangcono ukubona okuqukethwe okudumile kubhulogi yakho. Isidingo